Maxaa Laga Bartay Guusha ay England ka Gaartay Tunisia kulankooda Furitaanka Koobka Adduunka – Gool FM
“Hazard waxaa loo abuuray inuu u ciyaaro Real Madrid” – Xiddig hore oo Barcelona ah
“Waxay noqon doontaa maalin uu dareen ka buuxo” – Andrés Iniesta oo ka hadlay kulanka uu ka hor tagayo kooxdiisii hore ee Barcelona
David de Gea oo saxiixaya heshiis cusub & xiddigaan oo rikoor u dhigi doona goolhayeyaasha kubadda cagta.
Shaki weyn ayaa laga muujinayaa in fasal ciyaareedka bilaaban doona horyaalka La Liga laga isticmaali doono aaladda VAR.
Maxaa keenay inuu fashilmo qorshahii la damacsanaa in lagu kala badasho Pierre-Emerick Aubameyang & Mauro Icardi?
DEG-DEG: Zidane oo ku dhawaaqay in Gareth Bale uu ka tagayo kooxda Real Madrid
Andreas Pereira oo ku kaftamay inuu taleefoonka ka xadi doono Paul Pogba si uu garoonka Old Trafford usii joogo.
De Jong oo ka warbixiyay sababta uu u doortay maaliyada lambarka 21-aad, muxuuse ka yiri Griezmann?
PSG oo ka hadashay xaqiiqada ku aadan in Barcelona ay dalab kasoo gudbisay Neymar Jr
Antoine Griezmann: “Waan ilmeeyey markii aan heshiiska cusub u saxiixay Barcelona”
Maxaa Laga Bartay Guusha ay England ka Gaartay Tunisia kulankooda Furitaanka Koobka Adduunka
CR Shariif June 18, 2018
( Russia ) 18 Juunyo 2018. Xulka England ayaa guul xili dambe ah ka gaaray Tunisia kulankooda koowaad ee koobka adduunka 2018.
Dhaliyaha kooxda Tottenham ahna Kabtanka xulka Harry Kane ayaa noqoday geesiya guusha ku hogaamiyay xulkiisa isagoona dhaliyay labada gool ay ku adkaadeen.
Inkastoo kooxda qaarada Africa ee Tunisia ay cayaar wanaagsan soo bandhigeen balse waqti dambe ayaa laga dhaliyay goolka guusha ku raacday xulka seddxada lixaab lagu naaneyso waxayna dheeshu ku idlaatay 2-1.
Habada maxaa laga bartay kulanka.
Harry Kane ayaa dhaliyay goolkii u horeyay ee England Tartamada waa weyn, isagoo guud ahaan tuuray 15 shuud (13 waa koobka qaramada Euros, 2 waa koobka adduuunka).
Shaxda xulka England ayaa dhamaantood xulka u saftay 248 kulan; waana safashadii ugu yareen koox England mataleysa ee cayaarto tartan wayn tan iyo bishii June 1962 oo saf guud ahaan cayaaray 246 kulan ay xulka u dheeleen kulan ay wajaheen Bulgaria.
Ferjani Sassi goolka uu ka dhaliyay England waa rigooradii u horeysay ee laga dhaliyo kulan koobka adduunka ah tan iyo bishii 1998 marakaan waxaa rigoore ka dhaliyay Gabriel Batistuta kulan ay la cayaareen Argentina.
England ayaa sameysay lix shuud ilaa hataan qeybta koowaad, waana shuudadkii ugu badnaa ay kaambiyo sameyaan tan iyo 1966 markaa oo ay afar dhamaadkii lix darbo ku tureen goolka Portugal qeybta hore dheesha.
Harry Kane ayaa iminka dhaliyay 15 gool 25 kulan uu u saftay England; cayaariyahankii u dambeyay ee goolal intaa ka badan dhaliyay 25 kulan ee u horeya kulamada xulka England wuxuu ahaa Gary Lineker oo dhaliyay 20 gool.
England ayaa gool ku dhalisay markii u horeysay 90 daqiiqo cayaar koobka adduunka ah.
Harry Kane waa cayaariyahankii u horeyay ee gool ka dhaliyay laba goolhaye hal cayaar oo koobka adduunkaa tan iyo Diego Forlan oo ka dhaliyay South Africa 2010.
Harry Kane oo Waqti dambe Guul ku Hogaamiyay Qaranka England kulankii ay Wajaheen Tunisia
Xulalka Carbeed ee Qaraada Africa oo Guuldareystay Kulamadooda Furitaanka Koobka Adduunka Waqti Dambe